ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ANKARAY စက်ရုံမီးလုံးများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူခြင်း RayHaber
[31 / 12 / 2019] Bursa အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေများမြှင့်တင်ပါ။ အသစ်သက်တမ်းဇန်နဝါရီလ 1	16 Bursa
[31 / 12 / 2019] ခရီးသည်သန်း ၇၀၀ နီးပါးကို Istanbul Metro သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[31 / 12 / 2019] TÜDEMSAŞ GCC အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်	58 Sivas
[31 / 12 / 2019] သီးခြားမီးရထားလမ်းလိုင်း ၂ ခု၏အခြေခံကို Kayseri တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်မည်	38 Kayseri
[31 / 12 / 2019] Marmaray သည်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအချိန်အထိအမှုဆောင်လိမ့်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ANKARAY Lighting ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်ကရိယာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ANKARAY Lighting ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်ကရိယာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူ
28 / 11 / 2016 လေလံပွဲ, အတ္တ, အထွေထွေ, Institute, mal လေလံ, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ
ANKARAY Lighting ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်ကရိယာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူ
ANKARAY အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူနဲ့အလင်းရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်ကရိယာစီးပွားရေးဧည့်ခံတပ်ဆင်ခြင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 421520
9 ကလောင်, ANKARAY Lighting ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်ကရိယာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ကုန်စည်၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ခ) တည်နေရာ: ANKARAY စီးပွားရေးဂိုဒေါင်Söğütözü -ANKARA
ဂ) Delivery နေ့စွဲ: စုစုပေါင်းပေးပို့၏ညီလာခံနှင့်ကုဗထမ်းဘိုးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် installation ကိုအချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ထမ်းဘိုးတို့ကိုထက်မပိုရကြလိမ့်မည် 60 ရက်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်ကြော်ငြာတွေအတွက်ကုမ္ပဏီအစားအနည်းဆုံး 30 25 ရက်ပေါင်းအစိုင်အခဲလိုလျှင်နှင့်ရှိလျှင်ပြည်နယ်မူရင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီကတည်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဝတ်ဆင်ထားပြီးကြောင်း, အကျိုးအပဲ့များနှင့်စွန့်ပစ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ယခင်, စွန့်ပစ်နှင့်အပျက်အစီးများကိုရောက်စေဖို့အဖြစ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်မှန်လျှင်, ကတည်းကတူညီသောလမ်းအတွက်ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်, တဖန်ပြည်နယ်အတွက်ဒုတိယ 30 35 နေ့ရက်ကာလ၌ကျန်ရှိနေသောစုစုပေါင်းထုတ်ကုန်တက်သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှိသမျှသည်အခြားသောထုတ်ကုန် Ankaray ဂိုဒေါင်ကိုလည်းအတွင်းပိုင်း 60 ပြက္ခဒိန်ရက်ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်လိုအပ်သည်။
က) Place: ရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန Mah ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်5Blok Kat:2Yenimahalle / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 14.12.2016 - 15: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - ANKARAY စက်ရုံခေါင်မိုးခုခံနိုင်မှု…
တင်ဒါအသိပေးချက် - Ankaray စက်ရုံအတွက်အသုံးပြုသည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ANKARAY DBI-converter ကိုဝယ်အိမ်ခြံမြေ
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ANKARAY စက်ရုံအလုပ်အ ၀ တ်အစားနှင့်…
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Ankaray Plant Jurnal Bed …
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကြေငြာချက် - ANKARAY စက်ရုံရထားဆွဲဆွဲစက်များ…
တင်ဒါအသိပေးချက် - National Electric Train Set Project Exterior Dış
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - အမျိုးသားလျှပ်စစ်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းအပြင်ပန်း…
တင်ဒါအသိပေးချက် - အလင်းရောင်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ပါ။
1: ဇန်နဝါရီ 10 00 @ - 11: 00
1: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း - ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်သဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကော်မရှင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြုပြင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအကြားရှိရထားလမ်း
3: ဇန်နဝါရီ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Arifiye Gara ကုလားကာဆူညံသံYaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kadikoy - Sultanbeyli ရထားစနစ်လျှောက်လွှာမီထရိုလိုင်းတိုင်ပင်ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır၏ဒီဇိုင်းအခြေခံဆောက်လုပ်ရေးမှ
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် ၁၉၂၀ Yahşihanရှိမီးရထား
TÜDEMSAŞ GCC အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Turhan ထံမှနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
သီးခြားမီးရထားလမ်းလိုင်း ၂ ခု၏အခြေခံကို Kayseri တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်မည်
ရာသီအတွက်အဆင်သင့်ÇambaşıDoğaအဆောက်အ ဦ အတွက်ဘန်ဂလို
ဥရောပဘေးထွက် Metrobus မှတ်တိုင်များနှင့် Metrobus မြေပုံ
ANTRAY နှင့် City Bus များသည်နှစ်သစ်ကူးအကြိုညအထိအခမဲ့ဖြစ်သည်
Akçarayလေ့လာရေးခရီးသည်ယနေ့ည ၂း၀၀ နာရီအထိဆက်လက်တည်ရှိမည်
မြို့တော်ဝန် Soyer အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ 2019 ကြေငြာခဲ့သည်
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ÇetinkayaDivriği၏ Km အမျိုးမျိုးတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း
3: ဇန်နဝါရီ 14 30 @ - 15: 30
NRC ညီလာခံ REMSA တရားမျှတသော
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း: T1 ရထားလိုင်း Zeytinburnu ကျောင်းပရဝုဏ်ဆောက်လုပ်ရေး
6: ဇန်နဝါရီ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - လှည်းသုတ်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုရရှိလိမ့်မည် (TUDEMSAS)
7: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - BalıkesirMüsellesဘေးထွက်လမ်းမများလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတည်ထောင်ခြင်း
8: ဇန်နဝါရီ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - Akçayလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အပန်းဖြေရေးဌာနခ Block Improvement
9: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
TÜVASAŞ 20 ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုရလဒ်ရလဒ်ကြေငြာခဲ့သည်
Mercedes နှင့် Renault မှရောင်းချမည့် Catenary Maintenance ယာဉ်များ
Catenary ကို Maintenance Tool ကိုရောင်းမည်
esray ထံမှရောင်းရန်ဒါမှမဟုတ်ငှားနံပါတ် 33 သည်လှည်း
ပြည်တွင်းကားများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် TOGG
2019 မြေထဲပင်လယ် Off- လမ်းဖလားနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ
CHEP ၏ဒီဂျစ်တယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Warranty လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်Tofaş၏ Artificial Intelligence Software အတွက်နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးဆု!
BMW Motorrad သည် R 18 ၏ Big Boxer ဗားရှင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Ekpet ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် MAN ကုန်တင်ကား ၁၂ စီးထပ်မံရရှိသည်